2 Afei bere a Pentekoste*+ afahyɛ no rekɔ so no, na wɔn nyinaa ahyiam faako, 2 na mpofirim ara wɔtee dede bi fii soro te sɛ mframa a ɛrebɔ denneennen, na egyigyei wɔ ofie a na wɔte mu no mu nyinaa.+ 3 Na wohuu tɛkrɛma bebree a ɛte sɛ ogya+ a ayiyi mmiako mmiako, na ebi besii wɔn mu biara so, 4 na honhom kronkron+ hyɛɛ wɔn nyinaa mãmã na wofii ase kaa kasa horow,+ sɛnea honhom no maa wɔn hokwan sɛ wɔnkasa no. 5 Ɛbae sɛ na Yudafo, nyamesurofo+ a wofi ɔman biara a ɛwɔ ɔsoro ase mu, wɔ Yerusalem.+ 6 Enti, bere a wɔtee nnyigyei yi no, nnipadɔm behyiae, na na wonhu nea ɛrekɔ so, efisɛ wɔn mu biara tee sɛ wɔreka n’ankasa kasa. 7 Nokwarem no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa na wɔde ahodwiriw kae sɛ: “Hwɛ, eyinom a wɔrekasa yi nyinaa nyɛ Galileafo+ anaa? 8 Na afei ɛyɛɛ dɛn na yɛn mu biara te kasa a wɔde woo no yi? 9 Partifo ne Mediafo+ ne Elamfo+ ne wɔn a wɔtete Mesopotamia, ne Yudea+ ne Kapadokia,+ Ponto+ ne Asia mpɔtam,+ 10 ne Frigia+ ne Pamfilia,+ Egypt ne Libia afã a ɛhwɛ Kirene, ne ahɔho a wofi Roma aba, kyerɛ sɛ, Yudafo ne wɔn a wɔasakra abɛyɛ Yudafo,+ 11 Kretafo+ ne Arabiafo,+ yɛte sɛ wɔde yɛn kasa reka Onyankopɔn nneɛma akɛse no ho asɛm.” 12 Yiw, ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa na wɔn tirim yɛɛ wɔn keserenee, na wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Dɛn na eyi kyerɛ?” 13 Nanso, afoforo dii wɔn ho fɛw na wofii ase kae sɛ: “Bobesa dɔkɔdɔkɔ abow wɔn.”+ 14 Na Petro ne dubiako+ no sɔre gyinae, na ɔmaa ne nne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yudea mmarima ne mo a motete Yerusalem nyinaa,+ munhu eyi na muntie me nsɛm. 15 Nokwasɛm ni, saa nnipa yi mmow nsa+ sɛnea mususuw no, efisɛ ɛyɛ dɔn a ɛto so abiɛsa.* 16 Na mmom eyi na wɔnam odiyifo Yoel so kae no sɛ, 17 ‘“Nna a edi akyiri no mu no,” Onyankopɔn na ose, “Mehwie me honhom+ no bi agu ɔhonam ahorow nyinaa so, na mo mmabarima ne mo mmabea bɛhyehyɛ nkɔm na mo mmerante benya anisoadehu na mo mpanyimfo asõsõ adae;+ 18 na mehwie me honhom no bi agu me nkoa ne me mfenaa mpo so wɔ saa nna no mu, na wɔbɛhyɛ nkɔm.+ 19 Na mɛma anwonwade aba wim wɔ soro na nsɛnkyerɛnne aba asase so wɔ fam, mogya ne ogya ne wusiw kumɔnn;+ 20 owia+ bɛdan sum na ɔsram adan mogya ansa na Yehowa da kɛse a ɛkyɛn so no aba.+ 21 Na obiara a ɔbɛbɔ Yehowa din afrɛ no no, wobegye no nkwa.”’+ 22 “Israel mmarima, muntie nsɛm yi: Yesu, Nasareni+ no, ɔbarima a Onyankopɔn afa anwonwade+ ne nsɛnkyerɛnne a ɔnam no so yɛe wɔ mo mu+ so ayi no adi akyerɛ mo pefee, sɛnea mo ara munim no, 23 ɔno na monam mmaratofo nsa so bɔɔ no duam yii no fii hɔ+ sɛ́ obi a wɔnam Onyankopɔn tirim agyina ne nim a onim dedaw+ so ayi no ama no. 24 Nanso Onyankopɔn san owu hama+ no, na onyan+ no, efisɛ na ɛrentumi nkɔ so nkyekyere no.+ 25 Dawid ka ne ho asɛm sɛ: ‘Mihu Yehowa m’anim daa; efisɛ ɔwɔ me nsa nifa so na amma manhinhim da.+ 26 Eyi nti me koma ani gyei na me tɛkrɛma dii ahurusi kɛse. Afei nso, me honam mpo bɛtena anidaso mu;+ 27 efisɛ worennyaw me kra wɔ Adamoa* mu, na woremma wo nokwafo nhu porɔwee.+ 28 Woama mahu nkwa kwan, wobɛma manya abotɔyam amee wɔ w’anim.’+ 29 “Mmarima, anuanom, momma menka abusuapanyin Dawid ho asɛm pen nkyerɛ mo, sɛ owui+ na wosiee no na ne da wɔ yɛn nkyɛn de besi nnɛ. 30 Enti, esiane sɛ na ɔyɛ odiyifo a onim sɛ Onyankopɔn aka no ntam sɛ ɔde n’asen mu aba bi besi n’ahengua so+ nti, 31 ohu siei na ɔkaa Kristo wusɔre ho asɛm sɛ wɔannyaw no Adamoa mu na ne honam nso anhu porɔwee.+ 32 Yesu yi na Onyankopɔn anyan no, na ɛyɛ nokwasɛm a yɛn nyinaa yɛ ho adansefo.+ 33 Afei esiane sɛ wɔmaa no so kɔɔ Onyankopɔn nsa nifa so+ na onyaa honhom kronkron a wɔhyɛɛ ho bɔ no fii Agya no hɔ+ nti, wahwie nea muhu na mote yi agu yɛn so. 34 Nokwarem no, Dawid ankɔ soro,+ nanso ɔno ankasa kae sɛ, ‘Yehowa ka kyerɛɛ me Wura sɛ: “Tena me nsa nifa,+ 35 kosi sɛ mede w’atamfo bɛyɛ wo nan ase ntiaso.”’+ 36 Enti ma Israel fie nyinaa nhu ampa sɛ Onyankopɔn ayɛ Yesu yi a mobɔɔ no asɛndua mu+ no Awurade+ ne Kristo.” 37 Na wɔtee eyi no, ɛwowɔɔ wɔn komam+ na wɔka kyerɛɛ Petro ne asomafo a aka no sɛ: “Mmarima, anuanom, dɛn na yɛnyɛ?”+ 38 Petro ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsakra,+ na momma wɔmmɔ mo mu biara asu+ wɔ Yesu Kristo din+ mu na moanya bɔne fafiri,+ na mubenya honhom kronkron akyɛde+ a wɔde ma kwa no. 39 Bɔhyɛ+ no wɔ hɔ ma mo ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri+ nyinaa, dodow biara a Yehowa yɛn Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba ne nkyɛn no.”+ 40 Na ɔde nsɛm foforo pii dii adanse fefeefe, na ɔkɔɔ so tuu wɔn fo sɛ: “Momma wonnye mo mfi awo ntoatoaso a akɔntɔn yi mu.”+ 41 Enti wɔbɔɔ wɔn a wɔde anigye gyee n’asɛm no asu,+ na saa da no wɔde akra bɛyɛ mpem abiɛsa bɛkaa wɔn ho.+ 42 Na wɔkɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ maa asomafo no nkyerɛkyerɛ, na wɔboom kyɛɛ nneɛma+ didii+ na wɔbɔɔ mpae.+ 43 Nokwarem no, ehu kaa ɔkra biara, na anwonwade ne nsɛnkyerɛnne bebree nam asomafo no so sisii.+ 44 Wɔn a wɔbɛyɛɛ gyidifo no nyinaa hyiaam na wɔn nneɛma nyinaa yɛɛ kwasafode,+ 45 na wofii ase tontɔn nea wɔwɔ+ ne wɔn agyapade kyekyɛɛ nea wonyae no maa obiara, sɛnea obiara ahiade te.+ 46 Na wɔde koma koro kɔɔ asɔrefie hɔ da biara da,+ na wodidii wɔn ho wɔn ho afie mu, na wɔde ahosɛpɛw+ ne koma a emu tew na edidii, 47 na woyii Onyankopɔn ayɛ, nyaa nnipa no nyinaa anim dom.+ Bere koro no ara mu no, Yehowa kɔɔ so de wɔn a ɔregye wɔn nkwa kaa wɔn ho+ daa.+
^ Pentekoste kyerɛ Aduonum wɔ Hela kasa mu. Ná wodi afahyɛ yi Nisan no akyi adaduonum.